मान्छे किन जन्मिन्छ र किन मर्छ ? यस्तो छ कारण | News Polar
मान्छे किन जन्मिन्छ र किन मर्छ ? यस्तो छ कारण
न्यूजपोलार बैशाख १५, २०७८, बुधबार
काठमाडौं । मानिस सबैको मनमा उठ्ने प्रश्न हामी किन जन्मन्छौ अनि किन मर्छौ ? जन्मेको किन होला ? आफै जानी जानी जन्मेको त पक्कै होईन होला ? जन्मको प्रयोजन के होला ? यत्रो दुख दिनुथियो भने किन जन्मेको ? के अर्थ छ यो सुख दुख भोग्नमा ? कस्ले गराएको होला यस्तो ? हामि सबैको मनमा जिज्ञासा लाग्नु स्वाभाविकै छ ।
प्रकाशित : बैशाख १५, २०७८, २१:१०:५२